Saynisyahanno ka tırsan Jaamacadda Oxford ee UK oo sheegay in tijaabadii socotay Talaalka Duumada lagu gulestay. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Saynisyahanno ka tırsan Jaamacadda Oxford ee UK oo sheegay in tijaabadii...
Saynisyahanno ka tırsan Jaamacadda Oxford ee UK oo sheegay in tijaabadii socotay Talaalka Duumada lagu gulestay.
Waa markii ugu horreysay ee tallaal cudurka kaneecada uu ka gudbo shuruudaha Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, taasoo khasab ka dhigaysa inuu 75% tallaalku waxtar leeyahay, si soo saaristiisa loo ansixiyo.
Cilmi-baareyaasha ayaa sheegay inay xilligan qorsheynayaan billowga tijaabada heerka 3-aad ee tallaalkan, taas oo ay ka qeybgali doonaan 4,800 oo carruur da’doodu u dhexeyso 5 bilood ilaa iyo 3 sano, kuwaas oo ku kala nool afar dal oo kala ah Burkina Faso, Kenya, Mali iyo Tanzania, waxaana tijaabadan hirgalinaya Machadka Serum ee dalka India iyo shirkadda tiknoolajiyadda Mareykanka ee Novavax.
“Iskudaygii ugu horreeyay ee tallaalkan waxaan ku aragnay in uu 77% waxtarkiisu sarreeyo, waxaana rajeyneynaa inaan sii hormari karno, waa tijaabo waxtarkeedu muuqdo, waana horumar dhab ah” ayuu yiri Hill.
Haddii wareega xiga ee tijaabada tallaalkan oo loo yaqaan R12/Matrix-M lagu guuleysto wuxuu isticmaalkiisa diyaar ku noqon doonaa laba sano gudahood
Previous articleMaxkamadda ciidamada Qalabka oo bilaawday dhagaysida dacwada Dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan
Next articleDalka Faransiiska oo baraya Dilkii gabar booliis ahayd oo lagu Dilay Mindi iyo ninkii Dilay oo la toogtay.
Nin Dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Masar ayaa iska soo tuuray Dabaq 4 biyaano ah, kadib markii dhismo uu ku sugnaa kulana haasaawayay...